फोटोग्राफीमा वेडिङ विधा नै रोज्नुको कारण के हो ? (भिडियो अन्र्तवार्ता) | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ चैत्र १७ गते ०१:०४
फोटोग्राफी क्षेत्रमा कसरि प्रवेश गर्नुभयो ?
सन २००१ तिर होला मै प्लस टु सकेपछि क्यानन नेपालमा जोडिए । त्यहाँ जोडिसकेपछि मैले १० वर्ष काम गरे । त्यो १० वर्षको दौरानमा क्यामेरा, फोटो तथा भिडियोसँग खेल्न पाए त्यसपछि मात्रै मैले फोटोग्राफी सुरु गरें ।
वेडिङ विधा छान्नुको कारण के हो ?
मैेले विभिन्न टेलिभिजनहरुमा च्यषनलहरुमा काम गर्दै आए तर अन्तिममा आफ्नै विजनेस भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेर वेडिङ तिर लागेको हुँ । फेसन तथा एडभटाईजिङमा ग्राहकले छोटो समय त सम्झेला तर वेडिङमा खिचेको फोटोले मलाई जिन्दगी भर सम्झिने छ भन्ने लाग्यो अनि यताप्रति जोडिए ।
वेडिङ विधामा व्यावसायिकता कस्तो पाउनु भएको छ ?
आर्थिक हिसावले अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा यसको क्षेत्र निकै नै राम्रो भएपनि नेपालमा भने केहि समस्या नै छ । नेपालमा यसको प्रभाव रुचि तथा मानवीय नाताले निकै राम्रो भएपनि व्यावसायिकता भने त्यति नै राम्रो हुन सकेको छैन । व्यावसायिकता भन्दा पनि रुचि र मानिसले सम्झिरहने भएकाले म खुसि छु ।
नेपालमा हुने वेडिङ कपलको वेडिङ इभेन्टलाई कसरि लिनुभएको छ ?
हामी जति काम गर्छै हामी सांस्कृतिक हिसावले काम गछौं । जसको पनि काम गछौं उहाँहरुलाई खुसि बनाएर काम गर्छौ । विदेशमा जस्तो एकजनाले धेरै पटक विहे गर्ने अनि इभेन्ट गर्ने भन्ने नेपालमा हुदैन त्यसकारण पनि नेपालमा काम गर्दा हामीले अति नै मिहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जीवना एक पल्ट हुने विवाहको फोटो खिच्ने वेडिङ फोटोग्राफरहरु ले अलि कम महत्व दिने गर्छ, भन्ने छ नि ?
मैले वेडिङ फोटोग्राफी सुरु गरेको लगभग १२ वर्ष जति भयो । हामी व्यवसायिक हिसावले वेडिङकै लागि काम गर्यौं । म भन्दा अगाडिका अग्रजहरुले चाँहि भन्नु हुन्थ्यो यो क्षेत्रमा आर्थिक त छैन, तर आनन्द चाँहि छ । विवाह पछि कपल फोटो सुट गर्ने चलन थियो, जब म आए मैले कपल सुट आउठडोर गर्ने कामको सुरुवात गरे । १०/१२ वर्ष अगाडि भन्दा त धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । फोटो ग्राफरले काम गरेन भन्ने कहिं कतै गुनासो त आउने गर्दछ । जसको लागि म के भन्छु भने जो नयाँ आएको, फाेटाेग्रफरले कल्चर वुझेको छैन भने वा मिहेनत गर्ने खालको छैन भने पनि यस्ता समस्या आउने गर्दछन ।